သနပ်ခါးမေ: September 2014
By **~ မြတ်ကြည်~** 3:36 AM ဆံပင်
ခေတ်ပဲ တစ်ပတ် ပြန်လည်လာတာလား မသိနော်။ ဆံပင်ကို အတိုအကပ်လေးတွေ၊ ဂုတ်ဝဲလေးတွေ ပြန်ညှပ်လာတာ တွေ့မိတယ်။ အသစ်ပေါ်လာတာ လေးတွေက pixie cut လေးတွေပေါ့။ နောက် တစ်မျိုးက ဆံပင် ဂုတ်ဝဲလေးတွေကို ပြန်ခွေတာလေးတွေ။
ရာသီဥတုက ကိုယ့်ဘက်မှာမရှိလို့ အေးရာအေးကြောင်း တိုတိုညှပ်ဖို့ စိတ်ကူးနေသူတွေအတွက် ဒီနှစ်၂၀၁၄ မှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ဆံပင် အတို ပုံစံလေးတွေ ပြန်လည် ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်။
ဆံပင် ညှပ်ဆိုင် သွားတဲ့ အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံ လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရုံပဲ။
တချို့ပုံစံလေးတွေက curling iron လေးနဲ့ အပြင်မသွားခင် ပြန် ပုံစံသွင်းဖို့ လိုတယ်နော်။
တစ်လကို ၄ ပုဒ် ရအောင် ရေးမယ်ဆိုပြီး အားခဲထားတာ ဒီတစ်လတော့ တာဝန်မကျေလိုက်ဘူး။
~ 미안 해요 ~
အလှတွေ ပိုနိုင်ကြပါစေရှင်။ :)
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:07 PM အာဒမ်နဲ့ပတ်သက်၍
မြတ်ကြည်တို့ မိန်းကလေးတွေတော်တော်များများက ကိုယ့်ကို နားလည်ပေးမယ့်သူ ကိုယ့်ကို ပျော်ရွှင်စေနိုင်မယ့်သူ တဘဝစာ တမြတ်တနိုး ချစ်နိုင်မယ့်သူ လိုချင်ကြတာချည်းပါပဲ။ ခက်တာက မှန်းထားသလို ဖြစ်မလာတာ။ (စိတ်ဓာတ်ကျအောင်ပြောတာ :P)
အခုနေဒီဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်နေတဲ့ ပျိုမေတွေမှာလည်း propose လုပ်ထားတဲ့ သူတွေ၊ သဘောကျတဲ့သူတွေရှိလို့ ချစ်သူ ထားသင့် မထားသင့် စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေရှိကြမှာပါ။ ဘိုင်သဝေး သီတင်းလည်း ကျွတ်တော့မယ်။ ^__^
အဲလို စိတ်ကူးနေပြီဆို အဖြစ်မနေထည့်တွက်ရမယ့် ဒီအချက်လေးတွေ ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
ကိုယ့်ကို သဘောကျနေတဲ့ သူက ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ? ဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာ မြန်မြန်ချလို့ ကောင်းတဲ့ အရာထဲမှာမပါပါဘူး။ ရုပ်လေးသနားကမား၊ အပြောလေးကောင်းရုံနဲ့ လက်ခံဖို့မလုံလောက်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကို ပြောတဲ့ စကား တခြား မိန်းကလေးတွေကိုလည်း ပြောချင်ပြောနေမှာလေ။ ယောက်ျားကတိစကား ဘယ်လောက်တည်လဲ၊ အပြောနဲ့ အလုပ်ညီလား ကြည့်ရမှာပေါ့။ ကိုယ့် အပေါ်ကို မဟုတ်ဘူးနော်။ သူများ အပေါ်ကို။ ကိုယ့်အပေါ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့် အချစ် ရချင်လို့ ကောင်းတာတွေပဲ လုပ်ရင်လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒါကို ကိုယ့်တစ်ယောက်တည်းအပေါ်ပဲ ကွက်ကောင်းတယ် မမြင်ပါနဲ့။ သူများအပေါ် မကောင်းတဲ့သူတွေဟာ အတ္တကြီးတဲ့သူတွေများတယ်။ ကိုယ့်အပေါ်လည်း အချိန်အကြာကြီးမကောင်းပေးနိုင်ပါဘူး။
ဘာဆိုင်လို့တုန်း? ဆိုင်တယ်။ :) တစ်ယောက်တည်းမို့ မပျော်ဘူး။ ချစ်သူလေးတစ်ယောက် အနားမှာရှိမှ ပျော်ဖို့ကောင်းမှာ။ ကိုယ့်ဘာသာတောင် ပျော်အောင်မနေနိုင်တာ။ သူများက ပျော်အောင် လုပ်ပေးနိုင်မယ်မထင်ပါနဲ့။ စိတ်ညစ်စရာတွေတောင်ပေးချင်ပေးဦးမှာ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်အတွက် အမြဲတမ်း ပျော်ရွှင်စရာတွေ မဖန်တီးနိုင်သလို အချိန်တိုင်းလည်း ဂရုစိုက်မှု အပြည့်မပေးနိုင်ပါဘူး။ မယုံရင် အိမ်ထောင်ကျပြီးသား အသိအစ်မတွေကို မေးကြည့်ကြည့်နော်။ :) ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှု သူများ လက်ထဲ မပုံအပ်ထားတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Don't attract attention inawrong way
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်က အမြဲတမ်း ဟော့ဟော့လေးတွေ ရွေးဝတ်တတ်သူလား? ကလပ်တို့ ဘားတို့ကို သွားလေ့ရှိသူလား? ကလပ်တို့ ဘာတို့မှာ လူကောင်း မရှိနိုင်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်အပေါ် အလေးမထားတဲ့ ယောက်ျားတွေကို တွေ့ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း ပိုများတာကို ပြောချင်တာပါ။ အဲလိုနေရာကို သွားလေ့သွားထ ရှိသူတွေဟာ အပျော်တွဲဖို့လောက်ပဲ ခေါင်းထဲထည့်တဲ့သူတွေ များပါတယ်။ သူများ အမြင်မှာ ကိုယ့်အပြင်အဆင်ရယ်၊ တွေ့တဲ့ နေရာတွေကိုကြည့်ပြီး လွယ်လွယ်ရနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးဆိုပြီး အထင်ခံရရင် မကောင်းပါဘူး။
ကိုယ်ဟာ ကိုယ်ပဲ ဖြစ်ပါစေ။ မြတ်ကြည်ပြောတာ ဖတ်တာလည်းဖတ်ပေါ့နော်။ ဟိုလို နေရင် ယောက်ျားလေးတွေ သဘောကျမယ် ဒီလိုဆိုရင် ပိုချစ်မယ်ဆိုပြီး သူအချစ်ခံရအောင် ကိုယ့်ဘဝကြီး ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် မနေရတာတော့ မဟုတ်သေးဘူး ထင်တာပဲ။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဟာလည်း ဘယ်တော့မှမရှိနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ့် ချစ်သူအပါအဝင်ပေါ့။ အကျင့်ဆိုတာ တချိန် မဟုတ် တချိန် ပေါ်လာမှာ။ ကိုယ် ရှာရမယ့်သူက ကိုယ့်အားနည်းချက် ကိုယ့်အကျင့်စရိုက်တွေကို လက်ခံနိုင်မယ့်သူ၊ သူရဲ့ အားနည်းချက်ကိုလည်း ကိုယ်က နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ အနေအထားရှိဖို့ပါပဲ။ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်သိမှု၊ သစ္စာရှိမှု၊ သနားကြင်နာမှု ရှိရင် ပြည့်စုံသလောက်ရှိပါတယ်။
ဒီ relationship မှာ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ အချက်တွေ မရှိဘူး မဟုတ်လား? မှန်ကန်တဲ့ လမ်းကြောင်းပြန်ပြင်ဖို့ ဝန်မလေးပါနဲ့။ တချို့မိန်းကလေးတွေက သူတို့ကောင်လေးတွေ သူတို့ အပေါ်မကောင်းဘူးဆိုတာ သိသော်ငြား၊ မထူးဇာတ်ခင်းပြီး relationship ကြီး အဓွန့်ရှည်ဖို့ဆိုပြီး စိတ်ဆင်းရဲခံကြပါတယ်။ ကိုယ့်အပေါ် နိုင်လိုမင်းထက် လုပ်တဲ့သူနဲ့လည်း လက်ထပ်ကြပါရဲ့။ ပြီးတော့ တသက်လုံး စိတ်ဆင်းရဲခံသွားကြလေသတည်းပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်က ပြောတော့ ပြောကြမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝက ကိုယ်နဲ့ပဲဆိုင်တာမို့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဆိုတာ သိတယ်ဆိုရင် နောက်ဆုတ်ဖို့ ဝန်မလေးကြပါနဲ့နော်။ နောက်ကျတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။
မိန်းမလည်တွေ ဘာကြောင့် ယောက်ျားကောင်းကောင်းရကြသလဲ? သူတို့က လက်ရှိအခြေအနေကိုပဲ ကြည့်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ သူတို့ လိုချင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရင် ကောက်ဆွဲထားလိုက်တယ်။ ရိုးရိုးသားသား မိန်းမသားတွေလို မကောင်းတဲ့ အချက်ရှိရင် သူ့ကို ငါ ပြောင်းလဲနိုင်မယ်၊ မပြည့်စုံသေးခင် အတူတူကြိုးစားပြီး ပါရမီဖြည့်ပေးမယ့်တို့ စိတ်မျိုးမထားကြပါဘူး။ အနစ်နာခံခဲ့ရတဲ့ မိန်းမသားတွေဟာ ဝေဆာလာတဲ့ အချိန်မှာ ထုတ်ပိုးပြီးသားလေးတွေကို မိန်းမလည်တွေကို ပေးလိုက်ရတာများတယ်။
" ကျော့ကျော့မော့မော့ နေနိုင်ဖို့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ယောက်ျားရွေးယူစို့" ဆိုတဲ့ အမြင်လည်း ပြောင်းသင့်ပြီ မြင်တာပါပဲ။ ပညာတတ် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ရှာနိုင်နေပြီပဲ။ ပိုက်ဆံပဲရှိပြီး တခြားဘာမှမရှိတဲ့သူနဲ့ တသက်လုံးနေသွားဖို့က လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်သရွေ့ ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတဲ့သူ မတွေ့လည်း စိတ်ညစ်စရာမရှိပါဘူး။
အချစ်လို့သာ ခေါင်းစဉ်တပ်ရတယ်၊ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ နည်းနည်း pessimistic ဆန်နေသလိုပဲ။ :P မြတ်ကြည် က တော့ တစ်ယောက်တည်းပဲတွဲ တစ်ယောက်တည်းပဲယူမယ်လို့ တွေးထားရင် ချစ်သူမဖြစ်ခင်ကတည်းက အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားစေချင်တယ်။ ချစ်သူဖြစ်ပြီးလည်း လက်ထပ်ဖို့ကို တွေးရဦးမှာပဲ။
ဒီဆောင်းပါးလေးနဲ့ အစ်မဆန်းထွန်း၊ အစ်မဒိုးကန်၊ ကန်ဒီနဲ့ အသူ ခေါ်ထားတဲ့ challenge တွေကို နှစ်ပတ် မပြည့်ခင်လေး ပြန်လည်ချေပ လိုက်ပါတယ်နော်။ ^.^
သာယာပျော်ရွှင်ဖွယ်နေ့ရက်တွေကို လျှောက်လှမ်း နိုင်ကြပါစေရှင်။ <3
Homesick - အိမ်မပြန်တာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ထင်တယ်
ဘယ်အင်္ကျီ၊ ဘယ် Bra
By **~ မြတ်ကြည်~** 7:06 AM ဖက်ရှင်
သာမန်ဝတ်နေကျဆိုရင်တော့ အထဲမှာ ဘာဝတ်ဝတ် support ပေးနေသရွေ့ သိပ်ကြီးဂရုစိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ လည်ဟိုက်တွေ ကျောဟိုက်တွေအတွက်ကျတော့ ရိုးရိုး bra တွေက အဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။ ဟော့ဟော့လေးတွေ ဝတ်တာစိတ်ဝင်စားတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် ဗီရိုထဲမှာ ရှိထားသင့်တဲ့ bra အမျိုးအစား လေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
လက်တလော celebrities တွေကြားမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ ကျောပြောင် ဂါဝန်တွေအတွက်ဆို ဒီ backless bra တွေက အသင့်တော်ဆုံးပါ။ ကျောလေး ဖော်ချင်ပါတယ်ဆိုမှ bra ကြိုးက တရှုပ်ရှုပ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့။ Backless bra ကခါး နေရာမှာ ပြန်ချိတ်ထားတာဆိုတော့ အရှေ့လေးတင် ကပ်တဲ့ silicon bra တွေလို ဘယ်အချိန် ကပ်ထားတာ ပြုတ်ထွက်မလဲ ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်။
ရင်လျှားပဲဝတ်ဝတ်၊ ရင် အပေါ်ပိုင်းကို ဇာအပါးလေးနဲ့ တွဲချုပ်တာပဲဝတ်ဝတ်၊ ရိုးရိုးအင်္ကျီပဲဝတ်ဝတ်၊ တော်တော်များများ အင်္ကျီတွေမှာ convertible bra လေးတွေက အသုံးဝင်ပါတယ်။ ကြိုးက ဖြုတ်လို့တပ်လို့ရတယ်မဟုတ်လား? ရိုးရိုး ဘရာ bra တစ်ခုဝယ်၊ strapless တစ်ခုဝယ် ပိုက်ဆံ ၂ခါ ကုန်ခံစရာမလိုတော့ဘူး။ ချိုင်းပြတ် ဒါမှမဟုတ် ပုခုံးပေါ်တဲ့ အင်္ကျီလေးတွေ အတွက်ဆိုလည်း criss-cross ချိတ်ပြီး ဝတ်လို့ရတော့ အဆင်တော်တော်ပြေတယ်။
ညပွဲတက်ရှိလို့ ရင်ညွန့်လောက်ထိ ဟိုက်တဲ့ V shape လည်ဟိုက် အကျယ် လေးတွေဝတ်တဲ့ အခါ တခြားက ပြသနာမတက်ဘူး။ bra ဘေးသားကထွက်ထွက်လာတာ။ ထွက်လာတဲ့ braကို ပြန်ဖုံး၊ ပဲနဲ့ကလည်းစားရသေး။ ခဏမကြာပါဘူး ပြန်ပေါ်၊ ပြန်ဖုံးရ အလုပ်ကိုရှုပ်ရော။ ရင်သားကို ခြားထားတဲ့ plunge bra လေးတွေက ဒီပြသနာကို ဖြေရှင်းပါလိမ့်မယ်။ အဲလို plunge လေးတွေမှာ push-up လေးပါ တွဲပေးထားတယ်ဆိုရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ဝယ်ရကျိုးနပ်တယ်ဆိုရမှာပေါ့နော်။
မိန်းကလေးတွေရဲ့ စိတ်က ဆန်းသားနော်။ အသားကျတော့ ပြချင်တယ်၊ bra ကျတော့ ကြိုးလေးပေါ်တာတောင် မကြိုက်ကြဘူး။ Bikini နဲ့ကျတော့ ဘာမှမဟုတ်တဲ့အတိုင်း beachမှာ လျှောက်သွားနေသား။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ ဒီအတိုင်းတွေးကြည့်တာ။ :D
photo credit: Michelle Phan